Qaab-dhismeedka, Isboortiga & Soo-saaraha ACP Iyo Dhoofiyeyaasha Shiinaha in ka badan 20 sano
Qaab dhismeedka birta ah
Qaab dhismeedka dogob loox ah
H Qaab dhismeedka Frame
Qalabka lagu hagaajin karo
Plank (Catwalk) & Jaranjarada
Qaab-dhismeedka Aluminium iyo qaab-qoryaha Dhaqameed Isbarbardhiga faa'iidooyinka dhaqaale
Qaab dhismeedka Aluminium iyo qaab alwaax dhaqameed Isbarbar dhiga faa'iidooyinka dhaqaale Mashruuca Aluminium qaab dhismeedka alwaax Qaab dhismeedka qaab dhismeedka Dhaqaalaha iyo hufnaanta Dhismaha Gaarka ah, amniga, rakibidda fudud iyo kala-goysyada Shilalka amniga ee joogtada ah, kala-baxa adag ee ...
Muxuu qiimaha birtu aad kor ugu kacay intaa kadib May 1, 2021?
Sababta ugu weyn ： 1. “Kaarboonka oo kor u kacaya iyo dhexdhexaadnimada kaarboon” waa ballan adag oo uu Shiinuhu u qaaday adduunka, mashruucyada aan buuxinna shuruudaha isticmaalka tamarta sare iyo qiiqa wasakheysan waa in si qaddarin leh loo tuuraa. Tani waa dib-u-habayn ballaadhan oo qoto dheer oo dhaqaale iyo bulsho ....
Sidee loo dhisaa iskudhafka ringlock? Badeecad caan ka ah Indonesia, Philippine, Thailand, Vietnam, Cambodia, Egypt, Saudia arabia
Wareejinta ringlock waa nooc cusub oo nidaamka iskudhafka. Qalabka ringlock-ka waxa loo yaqaan 'Sclock Scffoldinging, rosette ringlock scaffolding and layher scaffolding', iwm. Waxaa si weyn loogu isticmaalay mashaariicda dhismaha sida viaducts, tunnels, warshadaha, iwm, sidoo kale waa la isticmaali karaa ...
Goobta arjiga ee iskudhafka ringlock ee Koonfur Bari Aasiya
Goobta arjiga ee iskudhafka ringlock ee Koonfurta Aasiya Astaamaha Astaamaha ugu muhiimsan ee iskudhafka ringlock wuxuu kuxiranyahay "saxanka ringlock ring plate", tiirarka iskuulada waxaa laguxidhay saxan, jiifka waxaa lagu qalabeeyaa wadajir, balkana waxaa loo adeegsadaa isku xira si loo sameeyo ri ...
Qiimaha birta gudaha ayaa sii kordhaya
Aragtida Muhiimka ah: Dhinaca wax soo saarka, wax soo saarka birta ah ee guryaha waxaa saameeya hagaajinta "istiraatiijiyad dhexdhexaad ah" siyaasad istiraatiiji ah, taasoo xaddidi doonta wax soo saarka biraha gudaha muddada dhexe iyo muddada dheer. Waqtiga dhow, Tangshan iyo Shandong ilaalinta deegaanka ayaa nasan doona ...
Dhisida qaab-dhismeedka-6 astaamaha qalabka dhismaha qaab-dhismeedka plywood
Dhisida qaab-dhismeedka-6 astaamaha qalabka dhismaha plywood qaab-dhismeedka Qoryaha laba jibbaaran iyo qaab-dhismeedku had iyo jeer waxay ahaayeen laba khasnadood oo goobaha dhismaha ah. Sannadihii ugu dambeeyay, qaab dhismeedka plywood-ka ayaa si dhakhso leh u horumaray, noocyada ugu waaweyn ee geedku ka kooban yahayna waa eucalyptus iyo poplar. Ap ...
Isbarbardhigga qiimaha indhoolaha ah maahan ikhtiyaar, waana inaad fiiro gaar ah u yeelataa qodobbadan markaad soo iibsanayso qalabka wax lagu duubo ee 'ringlock scaffolding'!
Toddobaadkii hore dhammaadkiisii, ayaa la duubay fiidiyoow ka mid ah rooseetka 'ringlock' ka liita. Fiidiyowga, waxaad ku arki kartaa in shaqaale uu ku garaacayay diskiga biibiile bir ah. Kaliya laba garaacid ka dib, saxanka ayaa si cad u jabay. Maaddaama ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka loo yaqaan 'ringlock-scaffold', qalabka 'ringlock disc' waa qayb muhiim ah oo ...
Goorma ayaa la dhisayaa iskudhaf, sidee loo waafajin karaa tuubooyinka iyo lambarayaasha?
Goorma ayaa la dhisayaa iskudhaf, sidee loo waafajin karaa tuubooyinka iyo lambarayaasha? In kasta oo aad dooran kartid koob, ringlock, iskutallaab-xirid, iwm, oo loogu talagalay qashin-qubka, kharashka, wax-ku-oolnimada, iyo tixgelinta ku-habboonaanta, iskudhafka tuubada birta ah ee nooca laba-geesoodka ah ayaa weli ku fadhiya suuqa intiisa badan. Waxaa loo isticmaali karaa oo keliya ...
Wareejinta ringlock waa ka fiican tahay qalfoofka xayeysiinta
Wareejinta ringlock waa ka fiican tahay qalfoofka xayeysiinta Iskuxidhka ringlock iyo iskuxirida koobabka ayaa ah noocyo cusub oo iskabul, oo labadaba waxaa loo isticmaali karaa qaab dhismeed taageero ah, marka halkee ayaa labadan badanaa la isbarbar dhigaa, laakiin dadka badankood waxay u maleynayaan in qalfoofka ringlock-ka uu kafiican yahay xabbad-joojinta ...
Sidee ku saabsan qalfoofka galvanized? Ma fiicantahay in la isticmaalo?
Iskuxidhka iskudhafka galvanized guud ahaan waxaa loola jeedaa iskudhafka ringlock ee caanka ah. Dusha sare ee iskudhafka ringlock waxaa lagu daaweeyaa geedi socodka qulqulka kulul, nolosha adeeguna waa mid aad u sareysa ilaa 15 sano. iskudhafka ringlock wuxuu leeyahay qiimo jaban iyo hufnaan sare. Way fududahay in la kala furfuro oo la ...
Qaab aluminium iyo alwaax dhaqameed ...
Maxay aluminium isku dhafan yihiin si ay ...
Muxuu qiimaha birtu aad kor ugu kacay ...
Sidee loo dhisaa iskudhafka ringlock? Popu ...
Beerta dalabka ee iskudhafka ringlock ...
Kwikstage Qalabka Isboortiga, Qalabka Birta lagu hagaajin karo, Iskeelka Isku-dhejiska Isku-hagaajinta Jack, Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Qaybta Wareegtada Wareegta Ringlock,